News Collection: किसले कलह
यतिखेर विद्या बालनलाई रिलिजको क्रममा रहेको फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' मा दिएका उत्तेजक हाउभाउले चर्चामा ल्याएको छ । तर सबै चर्चा विद्याका लागि फाइदाजनक मात्रै छैनन् । विद्याले फिल्मका लागि ओठ जोडेर दिएका चुम्बनले उनका प्रेमी सिद्धार्थ रोयलाई भने असजिलो बनाएछ ।
सिरियल किसरका रूपमा चिनिएका इमरान हासमी र तुषार कपुरलाई विद्याले दिएका चुम्बनका 'डर्टी पिक्चर' ले दुईको सम्बन्धमै खटपट आउने देखाएको छ । सुपर मोडल सिल्क स्मिताको जीवनीमा आधारित बताइएको उक्त फिल्मका दृश्य हेरिसकेपछि बेखुसी देखिएका सिद्धार्थले आश्चर्य व्यक्त गरे, 'कसरी उनले त्यस्ता दृश्य दिनका लागि राजी भइन् होला ?'
तर पनि प्रेमीले फिल्मका दृश्यमा हस्तक्षेप भने गरेका छैनन् । उनले विद्याको करिअरलाई समेत प्रभाव नपरोस् भनेर लामो समय उनको निर्णयमा मुख खोलेका थिएनन् । तर आखिर प्रेमीमन न हो, कहाँ मान्थ्यो र ? उनले प्रेमिकालाई गुनासो गरे, 'यदि त्यस्ता दृश्यलाई कम महत्त्व दिन पनि त सकिन्थ्यो होला ?' तर फिल्मकी निर्मात्री एकता कपुरले भने उनको जिज्ञासामा असहमत हुँदै फिल्मका कुनै पनि दृश्य न्यूनीकरण नगर्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।
उनले स्मिताको चरित्र नै त्यस्तै रोमान्टिक भएकाले विद्याले खेल्ने चरित्रलाई हल्का बनाउन नसकिने तर्क गर्दै भनिन्, 'यो फिल्म नै रोमान्टिक केटी स्मिताको जीवनीका बारेमा हो । तर पनि यसमा घतलाग्दा विषयवस्तु र नाटकीयता पनि छ । त्यसैले यसमा विद्याले जेजस्तो गरेकी छन्, सबै विषयवस्तु र स्मिताको चरित्रकै माग बमोजिम छन् ।'
निर्देशक मिलान लुथि्रयाले पनि त्यस खालका दृश्य खिच्नु चानचुने काम नभएको जिकिर गर्दै सबै कामप्रति इमान्दार रहेकैले सोचेजस्तो कठिनाइ नभएकोमा खुसी मानेका छन् । 'यदि विद्यालाई उनका प्रेमीले चुम्बनका उक्त दृश्यहरूलाई कम गर्न भनेका भए हामीलाई उनको व्यक्तिगत जीवन थाहा हुने कुरा भएन । यत्ति हो, हामीले कामका लागि गरेका थियौं ।'